Iziqithi zaseFaroe-Sigmundarstova - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguWinnie
Emazantsi e-Oyrnafjall kukho le ndlwana ithandekayo kwindawo entle ejongene neTrangisvågsfjord. Indlu ihlaziywe ngokupheleleyo, inamagumbi okuhlambela amabini, ikhitshi kunye negumbi lokutyela elipholileyo kunye negumbi lokuhlala elinefenitshala entle.
Ngokwembali kunye nendlu ethandekayo yeholide eyakhiwe ekuqaleni kwe-1900 kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo kwi-2012. Umculi owaziwayo waseFaroese uSigmund Petersen 1903 ukuya kwi-1974 wangena izicathulo zakhe zobuntwana kule ndlu i-idyllic.
Ngexesha lokulungiswa kwavela okufunyenwe ngokweMbali, okwathi kwabonakala kungomnye wemizobo yeoyile yokuqala kaSigmund Petersen, eyaqhutywa ngasemva kwesigqubuthelo kwigumbi lokuhlala lendlu. Indlu ihlaziywe ngokupheleleyo kwi-2012 apho izitebhisi zendlu zigcinwe ukugcina umoya wembali.
Indlu ibonakala iqaqambile kwaye ibanzi emva kokulungiswa, kunye nokukhanya okuhle kwendalo kwiifestile ezininzi. Igumbi lokuhlala lixhotyiswe ngefenitshala etofotofo kunye namagumbi okulala amathathu: igumbi eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, igumbi eli-1 elinebhedi enkulu kunye negumbi eli-1 elinebhedi enkulu kunye neebhedi ezi-2 zabantu abangabodwa. Indlu inamagumbi okuhlambela ayi-2 ewonke aneshawari.
Ulwazi olongezelelweyo kwi sigmundarstova dk
Kummandla wendlu kukho amathuba ahlukeneyo emisebenzi yangaphandle.
Yikhilomitha enye kuphela ukusuka endlwini kukho umlambo onika amava okuloba iisalmon (akukho phepha-mvume lokuloba lifunwayo ukusuka emlonyeni womlambo kunye malunga nama-400 m ukuya phezulu). Indlu ikumgama wokuhamba ukuya kwisikhephe, iSmyril.
Umbuki zindwendwe ngu- Winnie
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Trongisvágur